कसरी एक प्रभावी वैश्विक व्यापार रणनीति बनाउने - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
मार्च 5, 2021 मार्च 4, 2021 सबा Seo अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
प्राप्य लक्ष्यहरू सेट गर्न नबिर्सनुहोस्।
तपाइँको प्रतिस्पर्धा अनुसन्धान गर्न याद गर्नुहोस्।
विश्वभर मा व्यापार पेशेवरहरु को विशेषज्ञता को उपयोग गर्न डराउनु हुँदैन।
तपाईंको व्यवसायलाई ग्लोबल लिदा ठूलो सम्भावना हुन्छ, तर तपाईंलाई रणनीति चाहिन्छ। संयुक्त राज्यमा, भन्दा बढी 20 प्रतिशत विश्वको कुल आम्दानीको उत्पन्न हुन्छ। धेरै वित्तीय प्रवाह अमेरिकाबाट आउँदा, यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रणनीति थाहा हुनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाईंको कम्पनी सफल हुन सक्दछ।
अधिक जानकारी खोज्नेहरूको लागि यी प्रभावकारी वैश्विक व्यापार रणनीति कसरी बनाउने भन्ने बारे सबै मार्गनिर्देशकहरू जाँच गर्नुहोस्। थप जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
तपाईं कहाँ ग्राहकहरू पाउन सक्नुहुन्छ? तपाइँ कसरी भुक्तानी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाईंले शिपिंग सामानहरू विचार गर्न आवश्यक छ?
लक्ष्यहरू सेट गर्न सम्झनुहोस्
विश्वव्यापी व्यापारमा सफल हुनको लागि, पहिले आफ्नो लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्। सकेसम्म विशिष्ट हुन कोसिस गर्नुहोस्। अर्को छ महिना, वर्ष, र पाँच बर्षको लागि तपाइँको बिक्री लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुहोस्। आफैलाई यस्ता प्रश्नहरू सोध्नुहोस्:
तपाईंको ग्राहक अवधारण के हुनेछ?
लगानीमा फिर्ताको लागि तपाईको समयरेखा के हो?
विस्तारमा तपाई कति समय खर्च गर्नुहुन्छ?
प्राप्य लक्ष्यहरू सेट गर्न नबिर्सनुहोस्। सानो सुरु गर्नुहोस् र तपाईंको प्लेटफर्ममा निर्माण गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्ना उद्देश्यहरू महसुस गर्नुहुन्छ। चेक आउट गर्नुहोस् जीवन विज्ञान उद्योग थप जानकारीको लागि।
तपाइँको सेवा वा उत्पादन निर्धारण गर्नुहोस्
अर्को, तपाइँको सेवा वा उत्पादन निर्धारण गर्नुहोस्। के तपाईंसँग केवल एक चीज तपाईं प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, वा यो सेवाहरू र उत्पादनहरूको विस्तृत सूची हो? पछिल्लोको मामलामा, कसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिले ल्याउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्न छनौट गर्नुहोस्। के तपाईंको उत्पाद वा सेवा माग मा छ? तपाईं कहाँ ग्राहकहरू पाउन सक्नुहुन्छ? तपाइँ कसरी भुक्तानी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाईंले शिपिंग सामानहरू विचार गर्न आवश्यक छ?
तपाइँको प्रतिस्पर्धा अनुसन्धान
सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाइँको प्रतिस्पर्धा अनुसन्धान गर्न याद गर्नुहोस्। कुन तरिकामा तपाइँको प्रतिस्पर्धा सफल र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मा असफल छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा एउटा सबैभन्दा ठूलो शिक्षण उपकरण हो जुन हामीले व्यवसायमा भूमण्डलीकरणको संसारमा नेभिगेट गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रणनीति राम्रोसँग बुझ्नको लागि धेरै बजारहरूमा हेर्नुहोस्।
सानो सुरु गर्नुहोस् र तपाईंको प्लेटफर्ममा निर्माण गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्ना उद्देश्यहरू महसुस गर्नुहुन्छ।
विश्वभर मा व्यापार पेशेवरहरु को विशेषज्ञता को उपयोग गर्न डराउनु हुँदैन। अमेरिकी वाणिज्य सेवाले तपाईंको फाइदाको लागि पचहत्तर भन्दा बढी देशहरूमा दूतावासहरूमा एक सय भन्दा बढी वाणिज्य दूतावासहरू प्रदान गर्दछ। व्यापारको भूमण्डलीकरणमा सफलताको उत्तम अवसरको लागि अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक र सानो व्यापार प्रशासनलाई सम्पर्क गर्ने विचार गर्नुहोस्।
तपाईंको वितरण रणनीति निर्णय गर्नुहोस्
तपाईंको वितरण रणनीति निर्णय गर्नुहोस्। के तपाइँ नयाँ विदेशी बजार अन्वेषण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ वा बजार निर्यात बिक्री प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईले जे पनि छनौट गर्नुभयो, ग्लोबल जाने तपाईंलाई अधिक पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ 95 प्रतिशत विश्वका उपभोक्ताहरूको, ती सबै संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर बस्ने।
मांग कहाँ छ र लाभदायकतालाई विचार गर्नुहोस्। तपाईंले सामना गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रमा सम्भावित उतार-चढावहरूको बारेमा सोच्नुहोस् र त्यसले तपाईंको नाफालाई कसरी असर गर्दछ। रणनीति कागजात भेला गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाइँको संगठनलाई तपाइँ र तपाइँको टीमलाई ट्र्याकमा राख्न अगाडि बढ्ने मार्गनिर्देशन गर्न तपाइँको योजनाहरू लेख्नुहोस्।
कसरी एक ग्लोबल व्यापार रणनीति बनाउने
एक वैश्विक व्यापार रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सफल क्यारियरको लागि आवश्यक छ। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? वैश्विक व्यवसायमा तपाईंको भविष्य पर्खिरहेको छ! यस जस्तो अन्य पोष्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? सबै चीजहरूको बारेमा जान्नको लागि हाम्रो बाँकी ब्लगमा जाँच गर्नुहोस्।
व्यापार सल्लाह सांप्रदायिक समाचार
हामी अतिथि पोष्ट सेवाहरू प्रदान गर्दछौं जसले तपाईंलाई प्रासंगिक लिंकहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंलाई गुगल पृष्ठमा राम्रो पृष्ठ श्रेणी र डोमेन अधिकार प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।